UMongameli uHerbert Hoover: i-Biography
UHerbert Hoover: UMongameli we-Thirty-First we-United States
UHoover wazalwa ngo-Agasti 10, 1874, eWest Branch, e-Iowa. Wakhula i Quaker. Ukususela kwiminyaka eyi-10, wayehlala eOregon. Uyise wakhe wafa xa uHoover wayeneminyaka emithathu. Emva kweminyaka emithathu, unina wafa, kwaye yena kunye nabantakwabo babini bathunyelwa ukuba bahlale nezihlobo ezahlukahlukeneyo. Waya esikolweni sendawo njengelutsha. Akazange aphumelele esikolweni esiphakeme. Emva koko wabhaliswa njengenxalenye yeklasi yokuqala kwiYunivesithi yaseStanford eCalifornia.
Waphumelela ngeganga le geology.
UHoover wayengunyana kaYese Clark Hoover, umkhandi nomthengisi, kunye noHuldah Minthorn, umfundisi weQuaker. Wayenomzalwana omnye nodade omnye. NgoFebruwari 10, 1899, uHerbert Hoover watshata noLou Henry. Wayengumfundi owayefunda naye uGeology kwiYunivesithi yeStanford. Bonke babenabantwana ababini: uHerbert Hoover Jr no-Allan Hoover. UHerbert Jr. uza kuba ngu-politician kunye no-shishini xa u-Allan wayeza kuba ngumntu oncedisayo owamisela ithala le-ofisi ka-titshala.
Umsebenzi kaHerbert Hoover Ngaphambi koMongameli
UHoover wasebenza ukususela ngo-1896-1914 njengoNjineli weMayini. Ngexesha leMfazwe Yehlabathi I , wahamba kwikomiti ye-American Relief Committee eyayinceda abaseMerika baxakeka eYurophu. Emva koko wayeyiNtloko yeKhomishoni yokuXhaswa kweBelgium kunye ne-American Relief Administration eyathumela iitoni zokutya kunye nezinto eziseYurophu. Wayekhonza njengoMlawuli weZokutya wase-United States (1917-18).
Wayebandakanyeka kwezinye iimfazwe kunye nemigudu yoxolo. Ukususela ngo-1921-28 waba nguNobhala wezoRhwebo kwaMongameli u- Warren G. Harding noCalvin Coolidge .
Ngomnyaka we-1928, uHoover wakhethwa njengomviwa weRiphabhulikhi kumongameli wokuqala kunye noCharles Curtis njengeqabane lakhe.
Wagijima waya ku-Alfred Smith, wokuqala wamaRoma Katolika ukuba akhethwe ukuba abe ngumongameli. Inkolo yakhe yayiyinxalenye ebalulekileyo yephulo lokulwa naye. I-Hoover iphelile ngokuphumelela ngama-58% evoti kunye no-444 kuma-531 amavoti.
Iziganeko kunye nemiphumo ye-Herbert Hoover kaMongameli
Ngomhla we-1930, iTariff yaseSmoot-Hawley yanyulwa ukuba incede ukukhusela abalimi nabanye ngokukhuphisana kwamanye amazwe. Ngelishwa, ezinye iintlanga nazo zenze iirhafu ezazithetha ukuba urhweba kwihlabathi liye lancipha.
NgoLwesine omnyama, ngo-Oktobha 24, 1929, amanani amasheya aqala ukuwa kakhulu. Emva koko ngo-Oktobha 29, ngo-1929, imarike yesitokisi yaphazamisa ngakumbi eyayiqala ukuCaluleka okukhulu. Ngenxa yobukhulu becala kubandakanya abantu abaninzi ababoleka imali ukuthenga izitokisi amawaka abantu balahlekelwa yiyo yonke into yokukhwabanisa kwemakethe. Nangona kunjalo, ukuCaluleka OkuPhambili kwaba ngumcimbi wehlabathi jikelele. Ngexesha loxinzelelo, ukungabikho kwemisebenzi kwabakho kwi-25%. Ngaphezulu, malunga ne-25% yazo zonke iibhanki zahluleka. UHoover akazange abone ubukhulu beengxaki kungekudala. Akazange enze iiprogram zokunceda abangasebenziyo kodwa kunoko, babeke amanyathelo athile ekuncedeni amashishini.
Ngo-Meyi 1932, malunga nama-15,000 e-veterans bahamba eWashington bafuna ukuhlawulwa ngokukhawuleza kwemali ye-inshurensi yemali eyanikezelwa ngo-1924.
Oku kwaziwa ngokuba yi-Bonus Matshi. Xa iCongress ayiphenduli iimfuno zabo, abaninzi beentlanzi bahlala kwaye bahlala kwiindawo eziqingqiweyo. I-Hoover yathumela uGeneral Douglas MacArthur ukuba aqhube ama-veterans. Basebenzisa i-gas gas kunye neetanki ukuba bahambe baye bafake umlilo ezintenteni zabo.
IsiTshintsho seMashumi amabini sagqitywa ngexesha leHoover e-ofisi. Oku kubizwa ngokuba 'ukulungiswa kwedoki', kwanciphisa ixesha lokuba umongameli ophumayo abe ngumsebenzi emva koonyulo lukaNovemba. Yadlulisela umhla wokuvulwa ukususela ngoMatshi 4 ukuya kuJanuwari 20.
I-Hoover yagijimela ukulungiswa kwakhona ngowe-1932 kodwa yahlulwa nguFranklin Roosevelt . Wayethatha umhlala-phantsi ePalo Alto, eCalifornia. Wayechasene noMsebenzi omtsha . Waqeshwa nje ngokuba ngumbonisi weZolimo zokuNika iNdlala (1946-47).
WayenguSihlalo weKomishoni kwiNtloko yeSebe eliLawulayo likomishoni kaRhulumente okanye i-Hoover (1947-49) kunye neKomishoni yeeNkonzo zikaRhulumente (1953-55) ezijoliswe ekufumaneni iindlela zokuphucula urhulumente. Wafa ngo-Oktobha 20, 1964, yomhlaza.
UHerbert Hoover wayengumongameli ngexesha leentlekele zezoqoqosho ezibi kunazo zonke emlandweni waseMelika. Wayengakulungele ukuthatha amanyathelo afanelekileyo ukunceda abangasebenzi. Ukongeza, izenzo zakhe malunga namaqela afana neBonus Marchers enza igama lakhe lifana neCress Depress . Ngokomzekelo, iihanti zazibizwa ngokuba yi "Hoovervilles" kunye namaphephandaba asetyenziselwa ukugubungela abantu kubanda babizwa ngokuthi "i-Hoover iblankets."
Ngaba uBhabheli waBeza iDatyala kaZwelonke?
Abanobhala beeNkcazo zeBarack Obama
Uluhlu lwabaMongameli bonke abaphilayo base-US
Izinto ezi-10 zikaMongameli uB Bush zenzele amalungelo oLuntu
Indima kaRichard Nixon kwi-Coverg
UJames Garfield - UMongameli Weshumi amabini we-United States
Kutheni Usuku Lokukhethwa NgoLwesibini ngoNovemba?
Izinto ezili-10 zokumazi ngoJohn Tyler
UJames Buchanan, uMongameli weshumi elinesihlanu wase-United States
5 Amacandelo okuVavanywa koVavanyo lweeMviwo
UThixo okanye uthixo? Ukuhlawulela okanye ukungabi Nciphisa
Ukungenelela kweFrench eMexico: iMfazwe yasePuebla
U-Amy Alcott: Umdlali Omkhulu Othabatha i-Flying Leap
Ukhokho lukaGerald R. Ford
I-Mormon Thatha i-Ghosts kunye ne-Hauntings
Blackbeard: Inyaniso, iMithetho, iFiction kunye neNtsomi
Iincwadi zeRobert A. Heinlein ngoThixo nakwiNkolo
Bayibaphi Abazali BamaGrike eHerri Hero Hero?
Ukuhlawulwa Inkcazo kunye nemizekelo (iFizikiki kunye neKhemistry)
21 I-Great Anime Series kunye neeFilimu zeBadala
Usuku lukaSadie Hawkins
Ngaba inja iyakwazi ukubona ama-Ghosts? Izilwanyana kunye neParanormal
I-Scaffolding - Ixesha lokuThunywa koMyalelo
IMfazwe Yehlabathi kwi-II Yurophu: i-Western Front
I-Biography ye-Queen Nefertiti waseYiputa
I-Diesel Engines vs Ii-Gas Engines
'Ukungathembeki' - U-Olivier Martinez Udliwano-ndlebe
Ubomi namaxesha kaBen E. King
I-Push-Pull-Rip-Tech Tech for Line Line
Iincwadi ezili-11 eziphezulu: iPrussia
Uhlalutyo 'lweeNtaba njengeeNdlovu ezimhlophe' nguErnest Hemingway